नेता पौडेलको हत्यापछि विप्लव नेकपाले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति !	Postpati – News For All
पोष्टपाटी २०७६ असार ५,बिहीबार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : २ मिनेट
असर ०५, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टीका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज तथा जनकपुर ब्युरो सदस्य कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोलि हानि हत्यागरेको बताएको छ । पार्टीका जनकपुर ब्युरो इन्चार्ज अरुणले बिहीबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हात र टाउकोमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको दाबी गरेका छन् ।
उनको हत्या भएपछी पार्टीले पौडेललाई सहिद घोषणा गरेको छ । ‘बागमती नगरपालिका वडा नं. २ धरहरा घर भएका कुमार पौडेललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी महान् सहिद घोषणा गर्दै उनिप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पौडेलको हत्यालाई गैरन्यायिक हत्या भन्दै भर्त्सना समेत गरेको छ । पौडेलको हत्यालाई सरकारको राज्यआतङ्क भएको जनाउदै इन्चार्ज अरुणले हत्याको बदला एकीकृत जनक्रान्तिकै माध्यमबाट लिने बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
पौडेलको बलिदानले पार्टी र आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउदै शोकसन्तप्त परिवारजन र पार्टी पङ्क्तिप्रति इन्चार्ज अरुणले गहिरो समवेदना प्रकट गरेका छन् । सहिदहरूको बलिदान खेर जान नदिने साथै एकीकृत जनक्रान्ति सफल गरिछाड्ने प्रतिबद्धता समेत प्रकट गरेका छन् ।’